Google Inosvitsa Mbiri Nyowani Enterprise Chromebook muKubatana naDell | Linux Vakapindwa muropa
Google pamwe naDell nguva pfupi yadarika vakaunza maCbookbook maviri matsva neiyo Google inoenderera mberi nekuedza kwayo zvine chekuita nebasa rekukwanisa kupinda mumunda wemalaptop ane mhinduro dzebhizinesi.
Aya maChromebook maviri matsva akaziviswa nekambani Iwo ndiwo Latitude 5400 (14-inch) uye Latitude 5300 2-in-1 (13-inch), ayo atovepo kuti atenge kubva paDell webhusaiti.
Zvinoenderana nezvakataurwa kwekutanga, aya makomputa akagadzirwa naDell mugadziri kumakambani ari muMicrosoft mhinduro dzakatarwa.
Iko kudyidzana pakati peGoogle naDell kunovavarira kupa vhezheni ne Chrome OS yebhizinesi. Iwo makomputa anouya aine hwakawanda hwemakore-based rutsigiro masevhisi kubva kuna Dell.
Nhasi, isu takazivisa nhevedzano yekuwedzeredzwa kune yedu Chrome Enterprise ecosystem nechinangwa chekuunza chazvino Chrome OS, gore-kutanga, kune mamwe mabhizinesi, pane yakavimbika Hardware ivo vatove kuziva uye kuda.
Izvi zvinogadziridza zvinosanganisira zvekutanga Chromebook Enterprise zvishandiso, ine yakavandudzwa manejimendi koni uye nyowani yekuvandudza-centric maficha. Pamwe chete, izvi zvinogadziridza zvinoita kuti mashandiro emazuva ano ave nyore kusvika kune ese mabhizinesi.
Izvi zvinobvumidza zvirinani kudzora kwekuendesa mashandiro emalaptop aya mukati memakambani.
Google News Cherechedzo inosimbisa kuwanikwa kwezvishandiso senge VMware Workspace Imwe iyo inofambisa kusangana pamwe iripo Windows nharaunda. Chii chimwe, Google inopa Chrome manejimendi manejimendi iyo, maererano nekambani, inobvumidza kuvandudzwa kwekutakura nguva.
“Aya ndiwo ega mabhizimusi eChannelbook anogona (zvingasarudzika) kukwira kusvika ku32GB ye RAM uye omhanyisa pane ekupedzisira 7th Gen Intel Core iXNUMX processor. Muchokwadi, neaya maChannelbook matsva, Google naDell varikutamba kadhi rinogadziriswa.
Muchokwadi, makambani anogona kusarudza maprosesa kubva kuCelerons kusvika kuCore i7. Google yechikamu chayo inowedzera kuti iyo yekuchengetedza svikiro inogona kukwira kusvika kumatabytes.
Zvichienderana nekugadziriswa uye mabasa akapihwa kumidziyo iyi, iyo Latitude 2 uye 1 5400-in-5300 nguva yekumhanya inogona kugara kusvika kumakumi maviri nemaawa gumi nemana maererano.
Iyo nyowani Latitude 5400 uye Latitude 5300 2-in-1 bhizinesi Chromebook dzinovhura dzakateedzana dzinofanira kuenderera naDell, asiwo nemamwe maOEMs.
Muchokwadi, Google inotarisira kubatana nevamwe maOEMs kuvhura mamwe maChannelbook emhando imwe chete emabhizinesi.
Chaizvoizvo, kufamba kwacho kunoreva kusundira Microsoft muchikamu umo kambani inotonga kwazvo.
Kufamba uku kwakabatana nekumisikidzwa kwe Windows 10 S, yakareruka vhezheni ye Windows 10 yakagadzirirwa kukwikwidza neChannelbook uye Chrome OS, pamachina anodhura anoburitswa nevashandi veMicrosoft.
Asi, Microsoft's gore-based musiyano haina kuita kunge iine tarisiro yekubudirira. Kubva kutanga kwegore rapfuura, haichazotariswe seyakasiyana yekushandisa system.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa ndezvekuti Microsoft yaiita iri nyore mode ye Windows 10, chinongedzo cheiyo iyo sisitimu yekushandisa isina kurarama maererano nezvinotarisirwa.
Chero zvazvingaitika, imwe ndeyekuti Microsoft inoenderera mberi nekuedza kwayo kusarasa ruoko rwayo munzira yegore rinotarisana neshandisa neWindows Lite chirongwa.
Chero zvazviri, Kubatana pakati peGoogle naDell yambiro yakakosha yeMicrosoft kutonga kuburikidza neWindows.
Ngatione kuti inosvika kupi kambani yeGoogle nguva ino mushure mekudonha Chrome OS-based piritsi kugadzirwa pakati pegore rino.
Google yaive yatove nesimba rayo rese maererano nehungwaru hwekunyepedzera panguva yekukundikana uku. Iyo kambani iri kuenderera mberi nekuwedzera iyi asset kuti izvitsauranise pachayo kubva kuMicrosoft uye nekupa masevhisi ayo anogona kunetesa makambani mune ayo fleet.
Ose maviri madhiraivhi achapa LTE sarudzo uye neUSB-C docking chiteshi. Latitude 5400 inowanikwa ne $ 699. Latitude 5300 2-in-1 inodhura $ 819.
Izvi Chromebook ichave ichiwanikwa mune dzinosvika makumi mashanu nyika uye mashandiro acho anowanikwa mumitauro gumi nemaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Inosvitsa Mbiri Nyowani Enterprise Chromebook muKubatana naDell